musha AFRAN BIOGRAPHY STORI Nigerian Singers Burna Vechidiki Nyaya Yevadiki Nhoroondo yeWoldold Biography Facts
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheBurna Boy Childhood Nhau, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Upenyu-Hupenyu (Musikana / Mukadzi), Mararamiro, Hupenyu hwega, uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika paakasvika akakurumbira.
Ehe, iwe neni tinoziva iye ari pakati vaimbi vanozivikanwa muNigeria. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakafunga kuverenga Burna Boy's Biography iyo yatakagadzirira, uye zvinonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Burna Mukomana Wevadiki Nyaya:
Kutanga kubva, Damini Ebunoluwa Ogulu akazvarwa musi wechipiri waChikunguru 2 kuAhoada muRivers State, Nigeria. Ndiye ega mwana wevana vaviri, akaberekerwa kuna amai vake, Bose Ogulu, uye baba, Samuel Ogulu.
Burna mukomana Mhuri Yemashure:
Nyika yekuNigeria yenyika yeYoruba nemadzinza eWest Africa akapedza makore mashoma mushure mekuzvarwa kwake muAhoada, nyika yeRivers isati yatamira kuLagos kwaakakurira pamwe chete nemunin'ina wake, Nissi Ogulu.
Burna Mukomana Hupenyu Hwepfuura neMusic:
Kukurira mudunhu reLagos, Burna Boy aive mwana anofara asina hanya nezvezhinji zvaiitwa nevamwe vezera rake. Aive achiri kufarira mimhanzi uye akaramba achifarira kuimba.
Burna Mukomana Dzidzo Uye Basa Rokuvaka:
Pamusoro pekudzidzira kwaBurna Boy, akaenda kuchikoro cheMontessori Primary kuPort Harcourt uye akazonyoresa kuCorona Secondary School Agbara mushure mekunge mhuri yake yatamira kuLagos state.
Pakazosvika nguva Burna Boy paakange ave 10years akura, waaidzidza naye akamupa kopi yemimhanzi yekugadzira software "FruityLoops". Achishandisa iyi software pane yekare komputa system, Burna Boy akatanga kuburitsa yake yaaida mimhanzi kunyange pazera nyoro. Akazoenda kuyunivhesiti muLondon kuti aenderere mberi nedzidzo yake.
Burna Mukomana Kwekutanga Yekuita Hupenyu Chokwadi:
Pasina chinguva mushure mekunge muimbi uye munyori wenziyo akanyoresa kuyunivhesiti, akapinda mune zvechisimba zvakasiyana izvo zvakaita kuti ave anomhanya-nemutemo. Akazorega kubva payunivhesiti mugore rake rechipiri uye akadzokera kuNigeria kwaakaita pfungwa dzake kuti azadzise zviroto zvake zvekuva muimbi mumhanzi mu2010.
Ndiri muNigeria, Burna Boy ane makore 19 okukura akaenda kumhenderekedzo yekumaodzanyemba kwenyika uko kwaakasangana nemugadziri LeriQ waaizivana. LeriQ yaive nenzvimbo ye studio yaakabvumidza muimbi kuti ashandise mukugadzirwa kwake kwemimhanzi.
Burna Boy Road To Fame Nyaya:
Burna Boy paakatanga kushanda mukugadzira mimhanzi yake, akatadza kuuya nemimhanzi yaigona kuridza rwiyo rweNigerian rwemimhanzi, nekuti akange apedza hupenyu hwake hwakawanda achiteerera vaimbi vekunze vakaita saDMX.
Kusakwanisa kwaBurna Boy kuburitsa mimhanzi yeNigerian yakagadziridzwa kwakamuita kuti agadzire hunyanzvi hwake hwakauya nekuda kwekukurudzira kwaakawana kubva mukuteerera kufarira kwaFela uye mimwe mimhanzi yeAfro uye nevaimbi veReggae.
Burna Mukomana Kusimuka Kuti Mukurumbira Nyaya:
Mushure mekusikwa kwechimiro chake chakasiyana, Burna Boy achibatana naLeriQ akaburitsa kambani yake imwe chete yainzi "Like To Party", izvo zvakaita kuti atorerwe muNigerian indasitiri yezvevaraidzo uye yakamuhwinha mubairo wePopu muna 2013.
Panguva yekunyora Burna Boy's Biography, anoonekwa semumwe wevakuru vekuNigeria maartist ane maitiro akasiyana mumimhanzi, zvese nekuda kwe "African Giant" yake. Kunge shamwari dzevaimbi veNigeria- izvo zvinofarira Davido uye Naira Marley, Burna zvechokwadi akagadzira niche yake muNigerian music indasitiri. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Burna Mukomana Werudo Hupenyu- Musikana, Mukadzi, Vana?
Burna Boy achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Burna Boy ave achibatanidzwa kune vasiri pasi pevasikana vatatu kubva pakutanga kwebasa rake.
Muimbi akambotora peji rake re Instagram kuti atumidze mufananidzo wake nemusikana wake wekutanga waakaratidza kuti aive nemakore gumi nematanhatu pavakatanga kudanana. Kunyangwe hazvo zita remukadzi uyu risina kuburitswa pachena kune veruzhinji, hukama hwavo hunofungidzirwa kuti hwakagara kwemakore matanhatu.
Aive avewo nechekuita nehukama hwakashata naUju Stella Johnson uyo aimuti akamuberekera mwana. Kunyangwe Burna Boy akabvuma kuti ave nehusiku humwe usiku, iye anoramba kugamuchira chokwadi nezvepamuviri wake kubva paukama hwepedyo.
Nezvehukama hwake panguva yekunyora, Burna Boy parizvino ari kufambidzana naStephanie victoria Allen nyanzvi inozivikanwa saStefflon Don, rapper weBritain, muimbi, uye munyori wenziyo. Idzo shiri mbiri dzerudo dzakasangana kuGhana apo rapper yeku UK yakapinda imwe yeBurna Boy's show mushure mekunge apotsa kubhururuka kwake. Stefflon Don anonzi anga aine mwana mukomana pazera regumi nemanomwe asi sarudza kuchengeta icho chikamu chehupenyu hwake zvakavanzika sezvo asingade kutariswa neruzhinji zvakanyanya pamhuri yake.
Burna Boy Hupenyu Hwemhuri:
Muimbi wekuNigeria auya kure uye ane nhengo dzemhuri yake kuti vatende. Muchikamu chino, tichakuudza zvimwe nezvevabereki vaBurna Boy pamwe nevamwe vemhuri yake vese.
Nezve baba vaBurna Vakomana:
VaSamuel Ogulu ndibaba vaBurna Boy, mumwe akavimbisa mhuri yekumhuri yepamusoro-soro mhuri yavo. Aifarira kuve nechokwadi chekuti mwanakomana wake ave nedzidzo yakanaka kwazvo. Nekudaro, akaendesa Burna Boy kune imwe nyika kuti anoenderera mberi nedzidzo yepamusoro muLondon. Rudo rwake rwemimhanzi yeBurna Boy rwakapa muimbi uyu chivimbo chakawedzerwa mukugadzira kwake mimhanzi.
Nezve amai vaBurna Mukomana:
Bose Ogulu ndiye amai vaBurna Boy. Iye ndiye maneja weBurna Boy uye akawana mukurumbira wakanaka wekutaura kwake kwekubvuma kwakaitwa chero nguva iye ane rombo rekugamuchira mubairo pachinzvimbo chemwanakomana wake. Ane bachelor of art muMutauro wekunze (anotaura Chirungu, chiGerman, chiFrench, chiNtaliyane, uye chiYoruba) uye Masters yehunyanzvi muDudziro, akange ashanda pamwe neFederal yeWest Africa Chambers of Commerce nemamwe masangano anoshanda.
About Vana veBurna Vakomana:
Nissi Ogulu i hanzvadzi yaBurna Boy. Iye ane tarenda zvakare mukuita mhanzi yemimhanzi pamwe nependi uye akapedza hwakawanda hwehupenyu hwake muLondon. Akauya mukuremekedzwa kweNigeria Entertainment Viwanda mu2016 nekuburitswa kwemasamba ake aipiwa zita rekuti "Teerera".
Pamusoro peBurna Boy's Hama:
Ari kure nemhuri yeBurna Boy, sekuru vake, Benson Idonije aivikanwa nemushamarari, uyezve maneja webhendi, uyo anozivikanwa naiye akatanga kufuka Fela Kuti. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pasekuru veBurna Boy amai nasekuru nasekuru. Saizvozvo zvishoma zvinozivikanwa nezve babamunini vake uye babamunini uye pamwe nababamunini vake naamainini vake.
Burna Mukomana Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Chii chinoita kuti Burna Boy idare? gara kumashure apo isu tinokuunzira maki ehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti utore mufananidzo wake. Kutanga, Burna Boy's Persona isanganiswa yekenza zodiac maitiro.
Iye anonzwira tsitsi, anonyengetedza, ane moyo munyoro, uye anogadzira zvikuru. Unhu hwambotaurwa hunotsanangura kuti nei akagadzira mimhanzi yake yakasarudzika. Zvinofarira zveBurna uye zvekuseredza zvinosanganisira; purogiramu yekombuta uye kubata nebhizinesi rezvivakwa.
Burna mukomana Mararamiro echokwadi:
Burna Boy ine mari inofungidzirwa yemamiriyoni gumi panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva mumimhanzi yake yekuedzesera uye kupedzisa anoitirana nema brands akadai saMartell Cognac apo ongororo yemashandisirwo emari yake maitiro anoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zveBurna Boy, iye ane imba hombe uye inodhura kwazvo iri munzvimbo yeLagos State, Nigeria. Imba iyi inonzi inofungidzirwa kunge yakakosha pamamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu. Muimbi wekuNigeria afro-fusion haana pasi pematanhatu mota dzinosanganisira; a Mercedes Benz, Range Rover Sport, G-ngoro, uye Lexus Saloon 150 kutaura mashoma. Iye zvakare ane nzvimbo yakatarwa paAjah inova nharaunda yakakura muLekki, Nigeria.
Burna mukomana Untold Chokwadi:
Kupedza yedu Burna Boy nyaya yehucheche uye biography pano ndidzo dzisina kutaurwa kana kushoma-dzinozivikanwa iwe dzausina kumboziva nezvake.
Iyo afro-fusion artiste yakatora zita rake rezita "Burna Boy" nekuda kwekuti aida ma comics. Aida kuzova hofori yakaipa kwazvo zvekuti aigara achidhirowa ma-comics ake nekutumidza zita rekuti superhero Burna.
Vabereki vemuBurna mukomana vakamurera nenzira yechiKristu uye zvinoenderana nemaitiro echitendero. Paaive mukomana, iyo tarenda yemhizha yakasimudzira kutenda kwake muna Mwari uye akararama hupenyu hwake achinyatsoziva uye achifunga nezve zvinhu pamusoro pekutenda kwake uye kuvimba naye kuna Mwari Wemasimbaose.
Burna mukomana akaisa tattoo yake yekutanga pazera re15, uye akaisa tattoo kupfuura 11 kubvira ipapo. Ane tattoo yemuenzaniso wake "Fela Kuti" paruoko rwake uye akacherechedzawo kuti ma tattoo aive chiratidzo chekumiririra.
Chokwadi # 4: Kunwa uye Kusvuta:
Burna Boy anofarira kuputa uye anotaurwa nezvake sechiputi pane zvinoverengeka nekuda kwekuita kwake kusvuta.
Burna Mukomana Gates Wiki:
Burna Boy's wiki zivobase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Zita rizere Damini Ebunoluwa Ogulu
Zita reNick Burna Boy
Akazvarwa 2nd July 1991
Baba Samuel Ogulu
Amai Bose Ogulu
Vanun'una Nissi Ogulu (hanzvadzi diki)
Net Worth $ Miriyoni 10
urefu 1.85 m (6 ′ 1 ″)
uremu 84 kg (185 lbs)
Kunwa / kuputa Ehe
Kutenda nekuverenga Biography yeBurna Boy. Zvakawanda zvakadaro, ndinokutenda nekutenda mazviri Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paBurna Boy Biography uye Nyaya Yeechidiki, vatariri vedu vakanga vari pahwindo rekunyatsojeka uye kusasarura. Nomutsa isa zvimiro zvako kana kuti tibate kana ukaona chimwe chinhu chisinga tarise pane ino chinyorwa nezveBurna. Kana zvisina kudaro, tiudze zvaunofunga nezveNigerian Rockstar.